Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe we-2014 | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 10, 2014 NgoLwesihlanu, January 10, 2014 Douglas Karr
Besilokhu sabelana ngama-infographics amahle kakhulu Izindlela zokuthengisa ze-2014 nale evela ku-Uberflip yehlukile - ukuhlinzeka ngokuqonda okuthile kokuthi okuqukethwe kuba maphakathi nokukhangisa oku-inthanethi komkhiqizo. Ngisho nasenhlanganweni yethu uqobo, sesisuse izinsizakusebenza saya ekumaketheni okuqukethwe kwawo wonke amaklayenti ethu… elinye lamalungu eqembu lethu abaluleke kakhulu UJenn Lisak othuthukisa amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu.
Uberflip muva nje uthathe ukubukeka kwe-infographic kuzindlela ezinkulu zokumaketha zika-2013 futhi manje babheke phambili esikhathini esizayo! Eminyakeni edlule, ukumaketha kokuqukethwe kusukile kumnandi ukuba nakho kuya okumele ube maqondana namasu wokumaketha wemikhiqizo. Ngakho-ke ubambe ini u-2014 ngalesi sikhala esivele ngokushesha?
Tags: Ukukhangisa Okuqukethwe